Maxay samayn karaan kooxda sheegata beesha caalamka mar haddii - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxay samayn karaan kooxda sheegata beesha caalamka mar haddii
Golaha shacabka ayaa gaaray go’aan taariikhiya oo dalka dib loo celinayo shacabka Somaliyeed si ay u doortaan madaxdooda. Waxana muddo laba sanno ah soo diyaarin doona doorashada guddiga madaxa banaan ee doorashada.
Haddaba ayagoo kooxda sheegata beesha caalamka ay si kasta u xanibeen heshiisyadii la gaaray 17 Sibtambar muddo 8 sideed bilood ahna soo gaarsiiyeen halka maanta la joogo, diideena in laga dhaqaaqo meesha la joogo, maxaa hadda la gudboon.
”Ma filayo in wax kale u furan yahay kooxdaas aan ka ahayn inay qaataan go’aanka golaha shacabka ee dalku ku galayo doorasho xalaala ayuu yiri Cali Calasow. Dana uguma jirto inay khilaafaan waayo waa laba sanno oo ay sii joogayaan dalka.
Waxaanan amaan u dirayaa golaha shacabka oo dalka u jiheeyay in shacabka loo adeego ayuu raaciyay Cali Calasow.